I-MASKED SINGER EPHUMELELEYO IQIKELELWE NGOKUCHANEKILEYO NGABAFUNDI BETV - UKUZONWABISA
Isazisi soMvumi weMasked ophumeleleyo siqikelelwe ngokuchanekileyo ngabafundi beTV
Eyokugqibela yeMvumikazi eMasked isasazwe kwi-ITV phezolo, kunye nezazisi zabagqwesileyo besizini yesithathu - kwaye kwafumaniseka ukuba abafundi bakamabonakude bebesazi ukuba ngubani uPanda ngalo lonke ixesha!
Isiqendu saphezolo sabona UPanda ubhengezwe njengophumeleleyo kuthotho lweMasked Singer's 2022, ngaphambi kokuba abhengezwe njengemvumi uNatalie Imbruglia.
Nangona kunjalo, emva ngoJanuwari, i-poll ekhethekileyo ye-TV ibonise ukuba ababukeli abaninzi Kukrokrelwa ukuba inokuba yimvumi ethi 'Torn's emva kwesazisi sikaPanda , kunye neepesenti ze-40 zokuvotela i-Imbruglia emva kokusebenza kwePanda yeNdaba enye yeNdlela yoBomi bam.
Ungaphoswa nantoni na ekhethekileyo. Fumana iincwadi zeendaba ngqo kwibhokisi yakho yangaphakathi.
Bhalisa ukuze ufumane ezamva nje nezibalaseleyo kwihlabathi lezolonwabo
Abanye abavoti bacinga ukuba inokuba yijaji yaseBritane enetalente uAmanda Holden (ipesenti ezingama-29) emva komlinganiswa othanda ukonwaba, ngelixa i-21 pesenti ivotele uPixie Lott kwaye i-10 lepesenti likhethe uRebecca Ferguson.
U-Imbruglia yimvumi yase-Australia-yaseBhritane-umbhali weengoma, owaziwa kakhulu ngeengoma ezingatshatanga ezifana ne-Big Mistake, Ngolo Suku kunye noMsi, kunye neendima zakhe kuMelwane, uJohnny IsiNgesi kunye ne-X Factor yase-Australia.
Ngobusuku bokugqibela wabona uPanda, Imashurumi kwaye Robobunny silwele ithuba lokuphumelela uthotho lwesithathu, kunye noRobobunny oza kwindawo yesithathu kwaye watyhilwa njengoMark Feehily weWestlife, ngaphambi kokuba uMushroom atyhilwe njengemvumi uCharlotte Church kwaye waphuma kwindawo yesibini.
Abafundi beTV bakwazile ukuqikelela ukuba ngoobani bobathathu abaphumeleleyo ngokuchanekileyo, ngokugqithileyo 70 pesenti ivoti Charlotte Church njengemvumi emva kweMushroom, ngelixa liphelile Iipesenti ezingama-60 zazicinga ukuba uRobobunny nguMark Feehily .
I-Masked Mvumi iya kubuyela kwi-ITV kulo nyaka uzayo. Jonga enye into eqhubekayo ngesiKhokelo sethu seTV. Kwakhona ndwendwela indawo yethu yokuzonwabisa ezinikeleyo ngeendaba ezingakumbi.
Ushicilelo lwamva nje lweTV luyathengiswa ngoku-bhalisa ngoku ukuze ukhuphelo ngalunye luziswe emnyango wakho. Ukufumana okungakumbi kwiinkwenkwezi ezinkulu kumabonakude, mamela ipodcast kaJane Garvey.
bukela imihla yokuqala yehotele kwi-intanethi
f1 umboniso we-tv 2018 uk
umdlalo weshedyuli yosuku
yintoni iinkawu zolwandle
ngokungqongqo yiza iingcali zokudanisa 2019
sisiporho sibuyela emandleni